सबैभन्दा सफल र धेरै नाफा हुने यी हुन् १० व्यवसाय - IAUA
ramkrishna December 24, 2016	सबैभन्दा सफल र धेरै नाफा हुने यी हुन् १० व्यवसाय
कोही पनि व्यक्ति विजिनेश सुरु गर्नुअघि नाफा नोक्सानको बिषयमा बढी सोच्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा गलत विजिनेश र रणनीति अपनाउँदा मानिसलाई घाटा सहनुपर्ने हुन्छ । विजिनेश सफल बनाउन कयौं चिजहरुको जरुरी हुन्छ, तर तीमध्ये पनि सबैभन्दा जरुरी कुरा हो उपयुक्त बिजिनेशको छनौट । आज हामी तपाईंलाई यस्तै १० उपयुक्त विजिनेश आइडियाको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जसको सफलताको दर अन्य विजिनेशको तुलनामा निकै धेरै नै छ । तपाईं पनि यी विजिनेश गरेर महिनाको लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ ।
विश्वभर हिजोआज कन्सल्टेन्ट र कन्ट्रयाक्टर्सको आवश्यकता बढिरहेको छ । कम्पनीहरुले यस्ता कन्सल्टेन्टहरुलाई राम्रो तलबको अफर गरिरहेका हुन्छन् । इञ्जिनियरिङ, मार्केटिङ र साइन्टिफिक रिसर्चमा कन्सल्टेन्टको धेरै आवश्यक हुन्छ । तपाईंले आफ्नो फर्म खोलेर आफ्नो साथमा कयौं कन्सल्टेन्टलाई जोड्न सक्नुहुन्छ । यस्ता कन्सल्टेन्टहरुलाई तपाईले कमिसनको आधारमा विभिन्न कम्पनीहरुमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
Previous Previous post: सुत्ने बेलामा कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता गल्तीहरु !
Next Next post: तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल)